Madagasikara ihany koa dia anisan’ireo firenena andrandraina alohan’i Mali, Sénégal ary Nosy Comores… raha aty Afrique sub-saharienne. Antony dia mahay miaina, manana fahaiza-manao, manana asa mendrika sy mahavelona tsara ny ankamaroan’ny teratany Malagasy… Vitsy no manadio trano fidiovana na koa mpandroaka fako. Mahavariana anefa fa raha oharina amin’ ireo firenen-kafa dia ny vola ampidirin’ny diaspora Malagasy isan-taona (transferts financiers annuels) dia ambany. Raha ny tarehimarika voaray dia ny vola ampidirin’ny fitambaran’ny diaspora maneran-tany tamin’ ny taona 2019 dia manodidina ny 500 miliara dolara. Ho an’i Mali, dia nampiditra vola mitentina 900 tapitrisa dolara ny diaspora ao aminy tamin’ny taona 2018, izany hoe 2 000 dolara isaky ny mpila ravinahitra. Ao Nosy Kaomoro, ny vola nampidirin’ ny diaspora dia mifandraika amin’ny 20%-n’ny harinkarena sady miantoka ny tahan’ny fisondrotan’ny vidim-piainana sy ny fampandrosoana ara-toekarena. 450 tapitrisa dolara monja no nampidirin’ny Diaspora Malagasy tamin’ny taona 2019, izany hoe 4,4%-n’ny harinkarena. Raha mba toy ny diaspora Kaomorianina ny diaspora Malagasy dia mitentina 2 miliara dolara isan-taona ny vola ampidiriny, ankoatra ireo fanampiana maro samihafa. Raha tsiahivina, ny governemanta etiopianina dia nahavita nanentana ireo terataniny rehetra na anatiny na ivelany tamin’ny fananganana ny « Barrage de Renaissance » izay mamatsy herinaratra 6,45 MW ary nitentina 4,8 miliara dolara. Marihana fa tsy nisy fanampiana avy amin’ireo mpamatsy vola vahiny ny fanatanterahana izany. Mba aiza isika Malagasy ? Raha ohatra ka miaina tsara tokoa ireo teratany Malagasy monina sy miasa any ivelany ireo dia azon’ny fanjakana atao ny mampiasa izany ho fitaovana ara-toekarena. Andraikitry ny fanjakana no mametraka ireo fitaovana ara-bola mifandraika amin’ izany manoloana ireo sehatra tsy miankina mba hahafahan’ny Diaspora Malagasy mamokatra misimisy kokoa amin’ny fampandrosoana ara-toekarena sy fahaleovantena ara-bola ho an’i Madagasikara.